About Us - Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i Co., Ltd
Ningbo Okwesibili i-hormone Factory esasungulwa 1988. Siye uzibophezele isilwane zizalela umkhakha iminyaka engu-30, futhi sihlanganisa impahla eluhlaza, ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, luhlolo, yokuthengisa, kanye nokwesekwa kwekhasimende ndawonye ukuba isikali ibhizinisi elikhulu. Inkampani yethu waklonyeliswa ngokuthi "Zhejiang High-tech umkhakha" futhi Cixi Top 20 amabhizinisi ".
Inkampani yethu ine uhlu olubanzi imikhiqizo zokuzala, futhi imikhiqizo yethu engabizi. Siphinde has-API imikhiqizo yethu eyinhloko 'bhalisiwe. Thina has kwekulu oyinyumba Igumbi isilwane esifundazweni ukuthola imikhiqizo yethu umphumela in amagundane kanye namagundane. Ngakho-ke, ukusebenza nokuzinza imikhiqizo kuqinisekisiwe. i-hormone zethu zokuzala kuthatha kuka 50% share emakethe of pulazi nabalimi emakethe lonke leli lizwe. Singabantu umphakeli eyinhloko Mengniu, Yili, Modern dlala, Beijing dolobha yezolimo, COFCO, Zhongding Dairy dlala, Wens, Chuying Agro-wokwelusa, Chia Tai iqembu, Dairy Bright nezinye amabhizinisi ezinkulu.
Inkampani yethu ine ubuchwepheshe elite kanye R & D amandla. udokotela Professional ehola 30 izigwili esikoleni sobudokotela njengoba R yethu & D Ithimba, ngempumelelo zenza imikhiqizo ezingaphezu kuka-100, futhi eminye yemikhiqizo bafakwa umugqa production. Chorionic yethu gonadotropin (hCG) 's impahla potency eluhlaza (10000iu / mg) is a lot ngaphezu kwezilinganiso European futhi American Pharmacopoeia (4500iu / mg), futhi siyakujabulela udumo umhlaba wonke. Sizimisele ukuthuthukisa imikhiqizo emisha: D-sodium chloride futhi Butylamine ezintathu utshwala prostaglandin F2-alpha yizidakamizwa yethu wezilwane entsha obhalisiwe, futhi emakethe. (Thina kuphela imboni ezibhalise D chloride kuze kube manje.) Inkampani yethu bhalisiwe Menotropins ngoba Injection (elinye igama: Chaopai su).
Imikhiqizo yenkampani yethu kabanzi inhlanzi, ezingulubeni, idayari, amagusha ezifuywayo, njll Ukuze inhlanzi, sinalo Compound Salmon GnRHa ngoba umjovo i-fish odakeni. Ukuze kwezingulube, thina njengamanje tongfasu (wangaphambili igama PC600) bhalisiwe, futhi zinambuzane kuyafana PG600 Intervets '. Altrenogest umkhiqizo omusha Ukubhalisa ketshezi yethu temlomo isidlulile inkonzo Ukubuyekeza ezolimo iyoba ukuqedela kokubhalisa ngokushesha. Ukuhlola Altrenogest zethu idlelo enkulu, lapho ukuphathwa batch swines ', sokufeza umphumela omangalisayo; ngesikhathi esifanayo, usebenzisa PMSG futhi GnRH ndawonye ngoba swines 'kulungisiwe isikhathi insemination, ekuthuthukiseni swines' zizalela ikhono. Ukuze idayari izinkomo, sebenzisa GnRH futhi D chloride ndawonye isikhathi fixed insemination idayari sika, inomphumela omuhle ka Corpus luteum, kanye nokwenza ngcono idayari izinkomo ekhulelwayo eliphakeme.
Kule minyaka engu-30 edlule, siyaqhubeka aphishekele izinto zobuchwepheshe obuphambili ukuze banikele imikhiqizo kangcono namasevisi kumakhasimende ethu. Sithunywe siphokophela ukuba ehamba phambili inkampani esemazweni amaningi lowo nqampuna umhlabeleli phambili emkhakheni wethu. Umbono wethu siyophishekela ubuchwepheshe eziphambili kakhulu emhlabeni futhi izigwili professional ukudala eliphezulu kakhulu nemisebenzi engcono, futhi lokho kusenza idumela kanye share emakethe nge ukuthembeka okuhle futhi ubuqotho kanye izinga esitebeleni.